Mogadishu Journal » Imaaraadka oo agabkoodii ka qaatay dugsiga tababar Jen Gordon
Mjournal :-Imaaraadka Carabta ayaa maanta inta badan agabkiisa iyo qalab milateri ka rartay xerada Tababar ee ay ku lahaayeen degmada Hodan ee magaalada Muqdisho.
Gawaari Konteenaro ah oo lagu daabulayay agabyo iyo saanad milateri ayaa la arkayay, kuwaasoo ka soo baxayay Xerada Jen. Gordon ee Imaaraadka ay Ciidamada ku tababaraan.
Wararka ayaa sheegaya in agabka laga daabulay Xeradaas la geeyay xarunta Safaaradda Imaaraadka Carabta ku leeyihiin degmada C/casiis.
Ilo kala duwan ayaa xaqiijinaya in aanay wali si rasmi ah Imaaraadka Carabta uga guurin Xerada, isla markaana ay wali u yaallaan agab kale, waxaana intii badneyd ee saraakiishii tababarka u qaabilsanaa ay aadeen Safaaradooda.
Dhinaca kale Isbitaalka Sheekh Zaaid ee Imaaraadka Carabta ku lahaa degmada Shingaani, gaar ahaan halkii la oran jiray Fiisha BRA ayaa maanta la xiray, iyadoo la joojiyay howlihii caawimaad iyo qaabilaada bukaanada oo maalin walba daawo maalmeed ka heli jiray isbitaalkaas.
Lama oga tallaabadan bilowga ah inay keeni karto in gebi ahaanba Imaaraadka ka guuro Muqdisho, iyadoo war saxaafadeed ay xalay faafisay Wakaaladda wararka Imaaraadka Carabta ee WAM lagu suaaciyay in la joojiyay gebi ahaan howshii tababarka iyo taageerida Ciidamada Soomaaliya ay siin jireen, taasoo qeyb ka aheyd mushaarka illaa labo kun askari oo ay horay u tababareen.